Blockchain Observatory kunye neForam ukuba Zisa EU ukuba "Usetyenziso" of Blockchain Tech - Blockchain News
EU uqala Blockchain Observatory ne Ethereum Isiqalo
ConsenSys, enye zokuqala ezininzi bavelele ecosystem ethereum, iya kusebenza kunye yiKomishini yaseYurophu ngomhla EU wayo Blockchain Observatory Forum, apho ngokusemthethweni umkhankaso ngoLwesine.
Unyaka-emibini iinzame kuxhasa ukuya € 340 million ($425 million) kwiiprojekthi blockchain. IKhomishini kuqala isaziso inyathelo spring yokugqibela, ikhale umnqweno wayo ukwandisa ulwazi kwamaziko blockchain kunye technologies zeleja asasazwa.
“Njengoko omdlali ebalulekileyo ekuhlaleni blockchain, ConsenSys uya ukuzibophelela esinamandla blockchain uphuhliso, nobuchule esiluqilima unxibelelwano kunye ecosystem blockchain jikelele, kwaye indlela zoshishino ukuzibandakanya kunye nabachaphazelekayo kunye neengcali kwi-EU kunye emhlabeni,” i-EC uthe ngoLwesine kwingxelo ekutyhileni ubambiswano.
ConsenSys, a global “studio production ubumbano” ukuvela software ngokuyintloko ngenxa blockchain ethereum, yasekwa nguJoseph Lubin, lowo CoinDesk agciniweyo ngenxa Eyona yayo Izazi in Blockchain 2017 series.
isaziso The yeKomishoni wagxininisa ngokungqalileyo umnqweno walo ukuhlanganisa blockchain ukuze kuxhamle imarike eyodwa European, waza waphawula ukuba njongo iphambili Observatory kunye Forum kukuba ukwakha kwiiprojekthi ezikhoyo ukuqinisekisa ukuba ukusebenza kwimida.
UMkomishinala ukuba Digital soQoqosho Society UMariya Gabriel wathi:
“Ndibona blockchain ngokutshintsha umdlalo kwaye ndifuna eYurophu ukuba phambili yophuhliso lwayo. Kufuneka ukuba ukuseka okusingqongileyo ekunene evumayo - Single Market Digital ngenxa blockchain ukuze bonke abemi bazuze, endaweni indulubhatyi lwamaphulo. I-EU Blockchain Observatory kunye neForam kulinyathelo elibalulekileyo kwelo cala.”
Valdis Dombrovskis, i EC vice mongameli ophethe uzinzo kwezemali, kwiinkonzo zemali kunye Capital Markets Union, phakathi kwezinye iiprojekthi, ngubani na ngaphambili izimvo kwi umdla EU ngo-technology blockchain, Wathi Observatory uya kukhokela EU policymaking.
Yena badumisa ingcamango ubuchwepheshe blockchain, bathi “phakathi technologies baninzi ngemoto ezintsha digital, blockchain unakho ukuba zenguqu ngokwenene kwiinkonzo zemali kunye neemarike.
Bank of Canada kuthi ...
Post Previous:UPS iifayile lomenzi ukwamkela Bitcoin for neelokhari
Post Next:Double digit Iilahleko ayitshayele Crypto Asset Market